Khudbadda Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Shirka Africa Now
Mudane Madaxweyne Yoweri Museveni ,Madaxweyne Ku Xigeenka Kenya
Madaxweyne Ku Xigeenka Tanzania ,Wasiirka Ganacsiga ee Masar
Mudanayaal iyo Marwooyin, iyo martida sharafta leh, Waxa sharaf ii ah inaan Kampala joogo aniga oo Shirka “Africa Now” kala qayb-gelaya madaxda Afrika, ganacsatada waaweyn iyo aqoonyahanka ku takhasusay Horumarka. Waxaan Madaxweyne Yoweri Museveni iyo Dowladda Uganda uga mahadcelinayaa soo dhawaynta iyo martisoorka diirran ee aniga iyo waftigayga na loo fidiyey. Waxaan sidoo kale hambalyeynayaa qabanqaabiyayaasha shirkan—gaar ahaan Xarunta Istaraatijiyadeed ee Hoggaaminta oo shirkan suurtagelisey.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Waxaan fursad u helay inaan ka qayb-galo kulamo kala duwan intii shirku socday aniga oo dhegaystay fikrado badan, siyaasado iyo tallaabooyin la soo jeediyay, waxaana qirayaa inaan ku rajo weynahay inaan ka qaarad ahaan gaari karno himilooyinkeenna haddii aan xoojinno iskaashigeenna. Ma jirto caqabad aan laga gudbi karin, buur aan la fanan karin iyo meel aan la gaari karin, haddii la helo ujeeddo guud iyo dadaal dhankeenna ka yimaadda. Waxaan aaminsanahay inaan haysanno hay’adihii, dadkii, aragtidii iyo hoggaamintii loo baahnaa si aan u gaarno Afrika isdhexgalkeedu sarreeyo, nabdoon isla markaana dhaqaaleheedu kobcayo.
Hoggaaminta iyo masuuliyad wadareedku waa tiirarka ugu muhiimsan ee isbeddelka, dib u habaynta iyo horumarka. Isdhexgalka, Amniga iyo Koboca Dhaqaale ee Afrika waa masuuliyad saaran qof kasta oo kamid ah hoggaamiyayaasha siyaasadda iyo ganacsiga iyo sidoo kale muwaadin kasta. Si kale haddaan u dhigo, waa inaan dhammaanteen ka qayb-qaadannaa horumarinta qaaraddan qaniga ah isla markaana qurxoon.
Waqtigii wax kasta laga sugi jiray dowladda waa uu dhammaaday. Dowladaha, hoggaamiyayaasha ganacsiga iyo muwaadiniintu waa inay si dhaw uga wada shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa heshiis bulsho oo cusub oo ku salaysan yagleelidda mustaqbal dan u ah dhammaan dadka oo idil. Waa inaynu ganacsiga iyo siyaasadda casriyaynaa oo hal abuur cusub ku soo kordhinnaa, kana faa’idaysannaa iskaashiyada caalamiga ah iyo kuwa heer qaarad. Waa inaan si madaxbannaan u qiimaynaa saamaynta siyaasadeheenna isla markaana si wadajir ah u fekernaa, maxaa yeelay wadajirka ayaynu ku xooggannahay,